Biodiversity Vision - ZU
Umbono wethu wezinto ezinhlobonhlobo ucacile:
⚫ ensure biodiversity
ngezinyathelo zikakhonkolo ...
Akwanele ukuthatha ezinye zezinto ezinhle njengokuthi wenze izingxenyana ezincane zemifula noma kuklanywe umhlaba ongasebenzisi okunye. Sidinga ukwaba / ukuthenga umhlaba ukwakha amakhorali aluhlaza ukusuka endaweni ephansi kuya endaweni ephakeme, kusukela eningizimu kuya enyakatho - isb. ukwenza lula ukufuduka kwezinhlobo zezilwane lapho kubhekene nempi yokukhulula yokushintsha kwesimo sezulu - njll.
⚫ kusekelwe kwisayensi
hhayi ezepolitiki ...
Kufanele kube yisimo sokuwina. Umhlaba omningi owabelwe imvelo yasendle ukuze kusizakale zonke izinhlobo kubandakanya abantu.
Ukuxosha imali ngokusekelwe kokuthanda kwezombusazwe noma kumaphrojekthi asevele esekelwa imali noma angenawo umqondo akumele kwenzeke.
Sekucacile ukuthi iningi lososayensi banombono wokuthi asenzi okwanele ukusindisa imvelo. Kodwa-ke angeke bonke bavumelane ngohlelo oluqondile lokusebenza. Kungaba nengqondo ukubeka izinsizakusebenza zibe izinhlobo ezahlukahlukene ezahlukahlukene. Enye yale projekthi ukwakha amachibi amancane neziqhingi ukunika izinyoni ushintsho ukuze ziphinde zizale.
Akuwona umbuzo wokuthi ubonwa wenze okuthile kepha usindisa ngempela lezo zitshalo nezilwane.
⚫ kanye nokuzinikela
2% we-GDP ...
Amanye amazwe anawo njengomgomo wawo ukusebenzisa 2% woMvuzo wawo Kazwelonke (iGreat Domestic Product) ukuzivikela. Ukuvikela ukuhlukahluka kwemvelo yomhlaba akubalulekile. Sifuna ama-2% we-GDP ukwenza ngcono kanye nokuvikela izinto eziphilayo.
Ngeke sikwazi ukulinda, ngakho-ke uhlelo kufanele lube olusheshayo, kunokuba lukhulise kancane ukusetshenziswa kwemali ngaphezulu kweminyaka eyi-x.
Ukuze ubale le nhloso u-2%, idinga ukuba yiphrojekthi eqashelwayo hhayi ngokusekelwa kwezepolitiki, njengoba kushiwo ngenhla.
Sicela uchofoze imicibisholo emincane ˅ ˄ ngaphezulu ngakwesokudla ukukhombisa noma ukufihla umbhalo owengeziwe extra ⬆️
Yabelana ngesixhumanisi sethu nawo wonke umuntu www.biodiversity.vision